Featured Blog Posts – December 2014 Archive (15)
नेपाल जेसिज राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा अर्याल निर्वाचित
नेपाल जेसिजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा लमजुङ जेसिजका डिलबहादुर (राजु) अर्याल निर्वाचित हुनुभएको छ । नेपाल जेसिजको आइतवार काभ्रेमा सम्पन्न ४१ औं अधिबेशनबाट ९ सय २२ मतकासाथ अर्याल राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो । अर्याल लमजुङको जेसिजको पूर्व अध्यक्ष रहनुभएको छ । अर्याल सँगै राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा १२ जना जेसीहरु चयन भएको लमजुङ जेसिज बर्ष २०१४ का अध्यक्ष सुरेश प्रधानले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, नेपाल जेसिजको राष्ट्रिय अध्यक्षमा धनञ्जयकुमार श्रेष्ठ चयन हुनुभएको छ । पोखरा जेसिजका…
Added by puza Pariyar on December 30, 2014 at 5:00pm — No Comments
नो थ्याङ्स रासस : तर मसँग मन र कलम बाँकी छ
जिन्दगी जिउने आधारहरु प्रशस्त छन् । मान्छेहरु गिट्टी कुटेर पनि बाँचिरहेका छन् । सडकमै सुतेर जीवन जिउनेहरु पनि धेरै छन् । कोही निजामति कर्मचारी होलान, कोही नीजि क्षेत्रमा काम गर्ने होलान । कोही परदेशी छन् । जो जहाँ भए पनि जे गरे पनि सबैले जसोतसो मृत्यु नजिक पुग्ने प्रयत्न गरिरहेकै छन् अर्थात जीवनको गुजार चलाइरहेका छन् । म मान्छे त्यस्तै एउटा पेसामा छु । पत्रकारिता गरेर बाँच्ने प्रयत्न गर्दैछु ।
मान्छेहरु बाँच्नका लागि हरेक प्रयत्न…
Added by Khem Raj wali (awichhinna) on December 28, 2014 at 10:00am —2Comments
महिला कानुन व्यवसायीको अभावमा न्याय पाउन समस्या
जानकी चन्द,कैलाली ! कैलाली कोटा तुल्सीपुर बस्ने लक्ष्मी बमले ४ बर्ष पहिले डोटीको सिलगढी नगरपालिका बस्ने प्रेम बिष्टसँग प्रेम बिवाह गरिन । प्रेम बिवाह गर्नु पूर्व हजारौं सपना देखाएका लक्ष्मीका श्रीमान प्रेमले ८ महिना पहिले छोडेर गए पछि उनको बिचल्ली भएको छ ।
“आमा-बुवा नभएको र भाई सानै भएकाले हामी २ जना श्रीमान श्रीमती बिहे गरे पछि कोटा तुल्सीपुर माईती घरमा नै बस्दै आएका थियौं ।” लक्ष्मीले भनिन्, “गत बर्षको…
Added by MeroReport on December 18, 2014 at 8:00pm — No Comments
लक्षित बजेटमा महिलाहरुको सक्रिय सहभागिता
दिलकुमारी विक सुर्खेत । प्रायः गरी गाविसमा लक्षित समूहको बजेट अन्य कुनै क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ । महिलाहरुको नाम छुट्याइएको बजेट विद्यालयको शौचालय निर्माण गर्न प्रयोग गरिने र त्यसलाई छात्राले पनि प्रयोग गर्छन नि भन्ने तर्क दिने चलन नौलो होइन । यस्ता धेरै उदाहरण छन् ।
जसमा लक्षित वर्गको लागि आएको बजेट सम्बन्धित वर्गहरुले पाएका छैनन् तर पूर्वी सुर्खेतको रामघाट गा.वि.स. भने महिलाहरुले गा.वि.स.बाट छुट्याइएको बजेटलाई महिला शसशक्तिकरण परियोजनाका लागि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । रामघाट ५ की…
बाँकेका मुस्लिम किशोरी: उज्यालो भविष्यका लागि उच्चशिक्षासम्म
सदिक्षा शाह, नेपालगन्ज! नेपालगञ्जकी अप्सना सिद्दिकि अहिले १८ बर्षकि भइन् । उनलाई सानो छदा विद्यालय जान निकै रहर लाग्थ्यो । तर मूस्लिम समुदायमा छोरीलाई शिक्षा दिक्षा दिन हुन्न भन्ने अन्धविश्वासको कारण उनको स्कुल जाने रहर पहिले रहरमै सिमित थियो । तर क्रमशः चेतना स्तर माथि बढ्दै जाँदा सिद्दिकिको स्कुल जाने रहर पुरा भएको छ ।
उनी अहिले उज्यालो भविष्यको खोजिमा नेपालगन्जको बरकतिया माविमा कक्षा ९ मा पढ्छिन् । यिनी…
नागरिक गुनासो : जवाफदेहिताको अचुक अस्त्र
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र भनौं या गणतन्त्र त्यसको अंग्रेजी डेमोक्रेसी नैं हुन्छ । त्यसको अर्थ अव्राहम लिंकनले भनेझैं जनताद्धारा जनताका लागि जनताबाट शासन संचालन गर्नुनैं बुझिन्छ । यस्तो व्यवस्था भएका देशका जनताहरु स्वतन्त्रता चाहन्छन्, उनीहरु स्वतन्त्र तवरले आफ्ना अभिव्यक्तिहरु अभिव्यक्त गर्न चाहन्छन् । यसरी आफ्ना अभिव्यत्तिहरु नागरिकले बिभिन्न तवरले राख्न सक्दछन् ।
कसैले गरेको राम्रो कार्यको खुलेर प्रशंसा गर्न सक्दछन् भने गलत कामका बिरुद्ध कन्दनी कसेर गाली पनि गर्न सक्दछन् । यसले…
Added by Namaskar Shah on December 17, 2014 at 11:30pm — No Comments
निलो माइक्रोको अराजक गतिविधी कहिले सम्म ?
साँझको ५:३० बजेको थियो म कार्यलय पुल्चोकबाट हस्याङफस्याङ गर्दै गाडी चढेर रत्नपार्क के पुग्न लागेको थिए, गाडीको झ्यालबाट बाहिर हेर्दा हुलका हुल मानिसहरु झुण्ड-झुण्डमा बसिरहेका थिए । ती मनिसहरु कुनै पार्टी एवं हिन्दू राज्यको माग गर्दै प्राय: रत्नपर्कमा जुलुस गर्न भेला हुने मनिसहरु नभई सबै आ–आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नका निम्ति गाडी कुरीरहेका यात्रुहरु हुन् । गाडी कहिले आउँछ भन्दैं एकटक भएर उभिरहेका हुन्छन् उनीहरु गन्तव्यमा पुग्नका निम्ति । यस्तो दृश्य प्राय: साँझपख सधैँ रत्नपार्कमा देखिने गर्दछ…
Added by Chaulagain Tara on December 17, 2014 at 10:30am — No Comments
बिहान आठ नबज्दै हामी दुवैजनालाई कामधन्दामा निस्किने चटारो हुन्छ । नहोस् पनि कसरी ! काम गर्नकै लागि थातथलो छोडेर यो राजधानी नगरीको अस्थायी बासिन्दा भईएकोछ तमाम झमेला र किचलो सहँदै । कैले घरबेटीको किचलो, कहिले सार्वजनिक सवारी साधनको झमेला, कहिले लोडसेडिङको त कहिले खानेपानीको । त्यसमाथि दुईजनाले नै काम नगर्ने हो भने खर्च धान्न पनि धौधौ हुन्छ । काम त जसोतसो दुवैजनाले पाईएको छ तर सानी छोरी समेत छे । उसलाई खुवाईपियाई गरेर स्कुल पठाएर मात्रै आफू काममा जानुपर्ने बाध्यताले अँझै चटारो हुन्छ विहानीपख…
Added by Prakash Lamichhane on December 9, 2014 at 1:30pm — No Comments
महिला अधिकार र यौन स्वतन्त्रता
लैङ्गिक विभेदका बारेमा हालमा आएर निकै बहसहरु चलिरहेका छन् । विगतका केहि दिनमा सेतोपाटीका लेखहरुमा महिला यौन स्वतन्त्रताको पक्ष र विपक्षमा गरिएका तर्कहरु निकै पढ्न पाइयो । यौन जस्तो विषयको यसरी सामाजिक संजालमा भएको छलफल एकदमै राम्रो हो । हाम्रो समाजमा यसबारे खुलेर कुरा नहुने हुँदा नै अनेकौ अन्धविश्वासहरु मौलाउने गर्छन् ।
महिलाहरुको यौन स्वतन्त्रताको हकमा पनि त्यस्तै अन्धविश्वासहरु हावी भएको पाइयो । दुई वर्षको जर्मन बसार्इ र हालको अमेरिकाको बसार्इले विभिन्न पश्चिमा देशहरुका साथीहरु…
Added by Raman Paneru on December 7, 2014 at 12:00pm — No Comments
पूनमको संघर्ष: पति खोज्दै बैंगलोरदेखि बारासम्म
आफुमाथि भएको हिंसा सहेर बस्ने मुलुकका तमाम महिलाहरुका लागि आफ्नो पति र पतिसँग पाउने अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्षरत हालै मात्र नेपाली नागरिक बन्न सफल भारतिय महिला पूनम कुमारी यादब एक अनुकरणिय उदाहरण बनेकी छिन । अंग्रेजी क्यालेण्डर अनुसार २४ जुन २०१३ मा पूनमसँग भारतको बैंगलोरमा प्रेम बिवाह गरेका नेपाली युवक दिपु गुप्ताले पूनमलाई सामाजिक रुपमा आफ्नो पत्नि मान्न अस्विकार गरेपछि आफ्नो पति र पतिसँगको अधिकार प्राप्तिका लागि पूनम बैंगलोरबाट नेपाल आएर संघर्ष गर्दै बसेकी छिन् ।
Added by Upendra Thakur on December 6, 2014 at 10:30pm —4Comments
भ्रष्टाचार बिरुद्ध 'किन' संस्कृति ?
बिभिन्न सामाजिक मूल्य र मान्यतामा जनताहरु बिभक्त छन् । समाजमा बसोवास गर्ने बिभिन्न खालका व्यक्तिहरुका बिचमा तर्क, बितर्क भईरहन्छ । समाजमा जातिय छुवाछुत, ठूलो, सानो, धनि, गरिब र सम्पन्न, बिपन्न बिचको द्वन्द कायम छ । तथापि आफु भन्दा भनिएका ठूला र सम्पन्नका बिरुद्ध आवाज उठाउनु त परको कुरा भयो, राज्यले दिने सेवा, सुबिधा र बिकास निर्माणको गुणस्तरका बारेमा आावाज उठाउने र बिकृतिका बिरुद्ध प्रश्न गर्ने संस्कारको समेत बिकास हुन अझै सकेको छैन ।
ठूला पदमा बसेका, पैसावाल र समाजमा प्रतिष्ठित…
Added by Namaskar Shah on December 3, 2014 at 10:30pm — No Comments
महिला हिंसाको कारण बाँझोपन
सँधैजसो रातको ८ बज्न लाग्दा वीरेन्द्रनगर-९ का २६ वर्षिय गिता चौधरीलाइ आज के हुने हो भनेर झसङ्ग हुने गर्छ । कारण अरु केही होइन- उनी आमा बन्न सक्दिनन् यही हो । दिन नसकिए हुनेथियो, कहिल्यै पनि रात नपरोस्-उनी कल्पना गर्छिन तर प्रकृति कसैको निर्देशन या आग्रहमा चल्दैन सधै रात हुनेगर्छ अनि सधै बज्ने गर्छ । ८ पनि उनको श्रीमान् संधै जाँडरक्सी खाएर घरमा छिर्ने बित्तिकै उनी माथि हातपात गर्न सुरु गर्छन् ।
चौधरीले रुँदै भनिन्-'एक दिन हैन दुई दिन हैन सधै शारिरिक र मानसिक यातना सहन बाध्य छु…
Added by sunita panta on December 3, 2014 at 5:00pm — No Comments
सन्तान सुख, महिला हिंसा र यार्मा
अहिले महिला हिंसा बिरुद्ध १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । श्रीमतीको चाहना विपरितको यौनसंसर्गलाई महिलामाथि गरिएको हिंसाका रुपमा बुझिन्छ । त्यसोभए तरुनी श्रीमतीको यौनचाहना पुरा नगरिनुलाई हिंसा भन्ने की नभन्ने? आफ्नो बच्चाकी आमा बन्न व्यग्र श्रीमतीको चाहनालाई बेवास्ता गर्नु हिंसा हो की हैन? बच्चा खेलाउने तिब्र चाहना…
Added by MeroReport on December 3, 2014 at 5:00pm — No Comments
छोरालाई क्याम्पस भर्ना, बुहारीलाई घरधन्दा !
आफ्ना दुःखका बेदना सुनाउदै जाँदा बिचमै उनको गला अवरुद्ध भयो । उल्टै म माथि आरोपहरु लगाउदै शारिरिक र मानसिक यातना दिन्थे ....... । यो भन्दा अघि उनले केही भन्नै सकिनन् ।
चारैतिर महिला हिंसा विरुद्ध थालिएको अभियानको चर्चा थियो । घरमा भएको रेडियोले पनि हिंसाका वारेमा समाचार भन्थ्यो । रेडियोको समाचार, सन्देश सुन्दा उनलाई झनै उदेक लाग्थ्यो । आफ्नो पिडा कसले सुनिदिने ! यस्ता अभियानका कुरा सुन्दै आएकी दाङ चैलाही घर भएकी ति युवतीले यस वर्ष थालिएको १६ दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियानमा आफ्ना…
Added by dashrath ghimire on December 3, 2014 at 12:30pm — No Comments
बुहारीलाई किन औषधी गर्ने ?
दुई सन्तानकी आमा रेखा बस्नेत (नाम परिवर्तन) अहिले २१ बर्षकी भईन् । उनको घर दाङको धर्नामा हो । आफ्ना विभिन्न रहर र चाहानाहरु हुँदाहुँदै पनि उनले १४ बर्षकै उमेरमा बिहे गरिन् । बिहे गर्ने बेलामा उनका श्रीमानले पढाउँछु, लेखाउँछु भने तर बिहेपछि न त उनले किताब कापीको मुख देख्न पाईन न त स्कुलको नै । सानैमा बिहे गरेर धेरै नै पछुतो लागेको बताउने उनीले आफ्नो कथा यसरी सुनाईन् :
म १४ बर्षको हुँदा बिहे भयो र त्यतीबेला म सात कक्षामा पढ्दै थिएँ । बिहे गर्ने बेलामा श्रीमान र घर परिवारले पढाउँछु,…
Added by sabita Acharya on December 1, 2014 at 10:00am — No Comments